प्रिमियर इन्स्योरेन्सले ८४ प्रतिशत बोनस सेयर बाँड्ने Bizshala -
प्रिमियर इन्स्योरेन्सले ८४ प्रतिशत बोनस सेयर बाँड्ने
काठमाण्डौ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ८४ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने भएको छ ।
प्रिमियर इन्स्योरेन्सको आउँदा असार ३१ गते हुने २५ औँ वार्षिक साधारणसभामा बोनस सेयर वितरणको विशेष प्रस्ताव पारित हुनेछ ।
कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको कमाइबाट आफ्ना सेयरधनीलाई वितरण गर्न प्रस्ताव गरेको चुक्ता पुँजी ५८ करोड ४० लाख रुपैयाँको ८४ प्रतिशत दरले ४९ करोड ५ लाख ६० हजार रुपैयाँबराबरको बोनस सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।
बोनसमा लाग्ने कर भने कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीहरुलाई नै तिराउने भएको छ । बोनस वितरणपश्चात कम्पनीको चुक्तापुँजी १ अर्ब ७ करोड ४५ लाख रुपैयाँभन्दा माथि हुन आउने छ ।
साधारण सभाका लागि इन्स्योरेन्स कम्पनीले असार २० गते शुक्रबारदेखि शेयर दाखिला खारेजी गर्ने भएको छ । यसअनुसार असार १९ गते बिहीबारसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम रहने शेयरधनीले मात्र ८४ प्रतिशत बोनस प्राप्त गर्न र साधारण सभामा प्रतिनिधित्व जनाउन सक्नेछ।
प्रिमियर इन्स्योरेन्सको शेयर हिजो मंगलबार दोस्रो बजारमा प्रतिकित्ता ९९७ रुपैयाँ बराबरमा कारोबार भएको छ।
त्यस्तै साधारणसभाबाट कम्पनीले निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीसँग गाभ्ने, गाभिने र प्राप्ति गर्ने सम्बन्धि सम्पूर्ण अधिकार सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्ने विशेष प्रस्ताव पनि पारित गर्ने छ ।
Premier Insurance Company Limited AGM prabhu life insurance
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक, खुद नाफामा ३४.९८%को छलाङ
मञ्जुश्री फाइनान्सको खुद नाफामा ५.२७%ले वृद्धि, ईपीएस रु. १३.७३
एभरेस्ट बैंकको खुद नाफा रु. ६९.८ करोड, रिभर्जमा १५.६५%ले वृद्धि
वोमी लघुवित्तको लिलामी सेयरमा बोलपत्र पेस गर्ने आज अन्तिम
काठमाण्डौ । वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले लिलामीमा...
काठमाण्डौ । आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक...
उच्च कारोबारमा वाणिज्य बैंकहरु हाबी, किन बढ्यो एसटीसीको
काठमाण्डौ । विगत धेरै समयदेखि साइड वेजमा रहेको सेयरबजारमा सोमबार...
कामना सेवा विकास बैंकले गत वर्षको मुनाफाबाट नगद लाभांशमात्र
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट...
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकद्वारा गत वर्षको मुनाफबाट १९% लाभांश
काठमाण्डौ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको...
चिलिमे हाइड्रोपावर र गुराँस लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन,
काठमाण्डौ । गत वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने भनिएको...
सेयरको व्यक्तिगत नामसारी अव्यवहारिक, सिडिएस्सीले ध्यान
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले घरायसी...
लयमा फर्किन खोजेको बजार किन घट्यो ? हिमालयन डिस्टीलरीका
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंक, हिमालयन डिस्टीलरी लगायतका कम्पनीहरुको...